बजारमा करेक्सन जारी, कहाँनेर पाउला टेवा ? - नेपालबहस
बजारमा करेक्सन जारी, कहाँनेर पाउला टेवा ?
| १६:१७:४९ मा प्रकाशित
माघ २९, काठमाडाैं । नेप्से परिसूचक १६ दशमलव ११ अंकले घट्दै २५२६ दशमलव ९२ को विन्दुमा बन्द भएको छ। नेप्से परिसूचक शुन्य दशमलव ६३ प्रतिशतले घटेकोमा ८ अर्ब ४१ करोडको शेयर कारोवार भएको छ ।
दोश्रो बजार २५५२ को विन्दुमा खुलेकोमा २५६५ को उच्च विन्दु सम्म पुगेको थियो । बजारको न्यून विन्दु २५२४ रहेको छ ।
बजारले अहिलको क्षेत्रमा टेवा पाउने सम्भावना देखिन्छ । अहिलेको क्षेत्र भने सामान्य टेवा हो । यदी बजार अहिलेको टेवा भन्दा मुनी बसेमा बजारले अर्को टेवा २३६०को क्षेत्रमा पाउने देखिन्छ। बजारमा आज पनि लगानीकर्ताले केही नाफा बुक गरेको देखिन्छ ।
लघुवित्त उपसुचकमा गिरावट आउने क्रम जारी छ । लघुवित्त उपसुचकमा २ दशमलव ८८ प्रतिशतको गिरावट आएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र म्युचअल फण्ड उपसुचकमा मात्र सामान्य वृद्धि भएको छ।
निफ्राको शेयर १४ नम्बरमा, बढ्यो की घट्यो ? २ दिन पहिले
शेयर बजारमा उछाल आएसँगै चीनमा २५० नयाँ अर्बपति थपिए ७ दिन पहिले
३.१२ प्रतिशतले घटेको बजारमा यी दश कम्पनीले गरे सर्वाधिक कारोबार ? १ हप्ता पहिले
बिहीवार चन्द्रागिरी हिल्सको शेयरमूल्य सर्वाधिक बढ्यो, निफ्राको के भयो ? २ हप्ता पहिले
आक्रामक वृद्धि भएको आजको बजारमा के छन् आजका सकारात्मक पक्ष ? ३ हप्ता पहिले
जनयुद्ध पश्चात् प्रचण्ड र बाबुरामले गलत बाटो रोजे : विप्लव ८ घण्टा पहिले
हुम्लामा निरन्तर हिमपात, हवाई उडान अवरुद्ध ९ घण्टा पहिले
प्रचण्ड नेपाल समुह बैठक : माओवादी केन्द्र अलग भएर जाने निर्णय १० घण्टा पहिले
नीति निर्माण तहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक : नेतृ कोइराला १६ घण्टा पहिले
दाहाल–नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठक सुरु १२ घण्टा पहिले
अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसमा एम्स इन्टरनेशनल कलेजकाे र्‍याली [ फाेटाे फिचर ] १४ घण्टा पहिले
महिलाको सशक्तीकरण, रोजगारी र शिक्षामा मुख्यमन्त्री राउतको जोड १७ घण्टा पहिले
चलचित्र पत्रकार संघ नेपालको पर्सा शाखा गठन ४ दिन पहिले
सिंगटी हाइड्रो इनर्जीले चैत ६ गतेदेखि २९ लाख कित्ता आईपीओमा बिक्री गर्ने ४ दिन पहिले
दोलखामा नेपाल टेलिकमको फोरजी विस्तार ४ दिन पहिले
नारी दिवसको अवसरमा १५ सय छात्रालाई साइकल प्रदान १३ घण्टा पहिले
बलात्कार आरोपमा एक युवक पक्राउ ५ दिन पहिले
ट्राफिक जरिवाना बैंकिङ प्रणालीमार्फत लिन शुरु ३ हप्ता पहिले
आफ्नै भवन बनाउँदैछन् ‘गाउँका सिंहदरबार’ ४ हप्ता पहिले
विप्लवले पनि गठन गर्यो प्रवक्ता प्रकाण्डको नेतृत्वमा वार्ता टाेली ७ दिन पहिले
नेपाल बैङ्कले कोभिड–१९ रोकथामका लागि एक करोड दिने १२ महिना पहिले
प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र जारी तथा नवीकरण स्थगित ७ महिना पहिले
प्रेम गर्नेहरुका लागि सधै प्रेमदिवस ३ हप्ता पहिले
नाग्मा पहिरो : कांग्रेसद्वारा दुःख व्यक्त ६ महिना पहिले